China Cambuckle သိုင်းကြိုးစက်နှင့်ထုတ်လုပ်သူများ SPC
Cam Buckle သိုင်းကြိုး
- Die Cast သွပ်ကင် Buckle ။
- ၅၀၀ ကီလိုဂရမ်၊ ၈၀၀ ကီလိုဂရမ်၊ ၁၀၀၀ ကီလိုဂရမ်နှင့်ရနိုင်သည်
- POF အမြှေးပါးတွင် Color Insert Card နှင့် Test Certificate များဖြင့်ထုပ်ပိုးထားသည်။
- Blister, Display Box, Display Racks စသည်တို့ဖြင့်ထုပ်ပိုးထားသည်။
n Bespoke ကြိုး
ကျယ်ပြန့်သော webbing အမျိုးမျိုးသောစံပုံစံများ၊ စီးပွားရေးအရပြောင်းပြန်လုပ်ဆောင်မှု၊ သံမဏိသို့မဟုတ်အခြားအထူးပြုလုပ်ထားသော ratchet buckle ပေါင်းမြောက်များစွာသောအသုံးအဆောင်အမျိုးအစားများအတွက်သင့်တော်သည့်ကြိုးများကိုချည်နှောင်ထားသည်။
ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုသောပစ္စည်းနှင့်ပစ္စည်းကိရိယာများသည်အရည်အသွေးကိုလျှော့မတွက်ပါ။ Webbing ကို tenacity polyester ဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီး UV တည်ငြိမ်ပြီး mineral acids များဖြင့်ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ များစွာသောအဆုံးပစ္စည်းကိရိယာများကို boron သံမဏိကြိုးဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးစက်၏ဂဟေဆက်စက်အားဖြင့်ထုတ်လုပ်မှု၏တည်ငြိမ်မှုကိုသေချာစေသည်။
Ratchet buckles များသည်နှစ်ပေါင်းများစွာစီးပွားရေးလုပ်နေသောနာမည်ကြီးထုတ်လုပ်သူများထံမှဖြစ်သည်။
n TUV-GS အသိအမှတ်ပြု
ကျွန်ုပ်တို့ပြုလုပ်သောစနစ်တိုင်းသည် European Load Restraint Standard EN12195-2 နှင့်ကိုက်ညီသည်။
35 1000 Cargo Lashing LC 1000daN, Cam Buckle
ပစ္စည်းစီးရီး Stf Lashing စွမ်းရည် စွမ်းရည် Lashing
ကျောက်တံတား စွမ်းရည် Lashing
အကျယ် အရှည် နားမလည်ဘူး End လျောက်ပတ်သည်
(daN) (daN) (daN) (daN) (မီလီမီတာ) ())
50C2000SH 1000 2000 50 4.7 + 0.3 သွပ်ဖြူ ဗီနိုင်း S ကိုချိတ်
50C2000NH 2000 505သွပ်ဖြူ -
LC 1000daN, Cam Buckle ၏ ၂၅ မီလီမီတာကြာမြင့်သော Cargo Lashing
25C8000SH 800 1600 25 4.7 + 0.3 သွပ်ဖြူ ဗီနိုင်း S ကိုချိတ်
25C8000NH 800 1600 255သွပ်ဖြူ -
25C5000SH 500 500 25 4.7 + 0.3 သွပ်ဖြူ ဗီနိုင်း S ကိုချိတ်
25C5000NH 500 1000 255သွပ်ဖြူ -
နောက်တစ်ခု: ဥရောပ EN12195-2 သည် Ratchet ချည်ထား
SPC ကုန်တင်သံများကိုဥရောပစံနှုန်း EN 12195-2 နှင့်အညီထုတ်လုပ်သည်။ ဤစံသည် LC (Lashing Capacity) ကို daN တွင်သတ်မှတ်သည်။
EN 12195-2 စံ၏အဓိကလိုအပ်ချက်များမှာ -
- hardware, ဆိုလိုသည်မှာ ratchet နှင့်ချိတ်များတွင်အနည်းဆုံး LC တန်ဖိုး 2x ရှိရန်အတွက်လုံခြုံရေးအချက်တစ်ခုရှိရမည်။
- ပြုပြင်မွမ်းမံထားသောသိုင်းကြိုးတွင်လုံခြုံရေးတန်ဖိုးအနည်းဆုံး ၃ ဆရှိသည့် LC တန်ဖိုးရှိရမည်။
- lashing system တစ်ခုလုံးသည် LC တန်ဖိုးအနည်းဆုံးနှစ်ဆပျက်ကွက်သောအဆင့်ရှိရမည်။
EN 12195-2 စံနှုန်းအရတင်းမာမှုသိုင်းကြိုးတွင်ပါရှိသောညွှန်ကြားချက်များပါသောတံဆိပ်ကပ်ရမည်။ ဤအညွှန်းသည် ratchet အပိုင်း (ratchet နှင့်တွဲထားသည့်သိုင်းကြိုး) နှင့်တင်းမာမှုသိုင်းကြိုးနှစ်ခုလုံးနှင့်တွဲရမည်။ polyester တင်းမာမှုကြိုးများအတွက်တံဆိပ်သည်အပြာရောင်ဖြစ်ရမည်။
1. LC1 = စွမ်းရည်မြှင့်ခြင်း (မျဉ်းဖြောင့်၌တင်းမာမှုအတွက်)
၂။ LC2 = ချည်နိုင်စွမ်း (ကြိုးဖြင့်)
3. SHF = စံလက်အင်အားစု
4. STF = စံတင်းမာမှုအင်အားစု
5. သိုင်းကြိုး၏ပစ္စည်းအမျိုးအစား (ပုံမှန်အားဖြင့် PES, polyester)
6. သိုင်းကြိုး၏ပစ္စည်းကိုဆန့်ထုတ်ထားသည့်ရာခိုင်နှုန်း (max ။ 7% permissible)
၇။ အရှည် (ကဆုပ်ကိုင်အပိုင်းသို့မဟုတ်တင်းမာမှုအပိုင်း၏။ ဥပမာ - ratchet တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း)
8. S / N = အမှတ်စဉ်နံပါတ် (သက်ဆိုင်သော lashing သိုင်းကြိုး၏)
ထုတ်လုပ်သူ၏ 10. အမည်သို့မဟုတ်လိုဂို
11. EN 12195-2: အားလုံး REMA ကုန်တင်ကြိမ်ဒဏ်ဥရောပစံ EN 12195-2 မှထုတ်လုပ်လျက်ရှိသည်
၁၂။ ထုတ်လုပ်မှုတစ်လ / တစ်နှစ်
အကြောင်းအရာ 1: Lashing စွမ်းရည်ကိုနားလည်ရန်
- LC တန်ဖိုးသည်ထောင့်ဖြတ်လျှပ်စီးအတွက်သာအရေးကြီးသည်။
- ဤလုံခြုံမှုနည်းဖြင့်အနည်းဆုံးလေးချောင်းကိုသုံးရမည် (ပုံ ၂) ။
- LC တန်ဖိုးနှင့်ဒေါင်လိုက်ကြိမ်လုံးထောင့်နှင့်အလျားလိုက်ထောင့်βတို့ပေါင်းစပ်။ အရေးကြီးသည်။
- load floor နှင့် lashing system ကြားဒေါင်လိုက် lashing angle α 20 °နှင့် 65 °အကြားဖြစ်ရမယ် (ပုံ - ၁) ။
- ဝန်၏ရှည်လျားသောဝင်ရိုးနှင့် lashing system ကြားရှိအလျားလိုက် lashing ထောင့်βသည် ၆ ဒီဂရီနှင့် ၅၅ ဒီဂရီကြားတွင်ရှိရမည် (ပုံ ၂) ။
အကြောင်းအရာ 2: Standard Tension Force ကိုဘယ်လိုနားလည်ရမလဲ။
- ဝန်ကိုချခြင်း၏အသုံးအများဆုံးနည်းလမ်းမှာချခြင်းဖြစ်သည်; ဤနည်းအားဖြင့်ဝန်ကိုကြမ်းပြင်ပေါ်သို့ခိုင်မာစွာဖိထားသည် (ပုံ ၃) ။
- ဤချည်နှောင်ခြင်းနည်းလမ်းတွင်၎င်းအတွက်အသုံးပြုသောအင်အားပမာဏသည်အရေးကြီးသည်။ တနည်းအားဖြင့် lashing system တွင်မည်မျှတင်းမာမှုကိုတည်ဆောက်နိုင်သည်။
- LC (Lashing Capacity) သည်ဤတွင်မည်သည့်အခန်းကဏ္ plays မှမပါ ၀ င်သော်လည်းစနစ်၏တင်းမာမှုသည်အရေးကြီးသည်။ Stf daN (Standard tension force) တွင်၎င်းကိုအပြာရောင် REMA တံဆိပ်တပ်ခြင်းတွင်ဖော်ပြသည်။
- ဤ Stf တန်ဖိုးကို Sh 50 (စံလက်အင်အား) ဖြင့်တိုင်းတာသည်။
- Stf တန်ဖိုးသည် lashing system ၏ LC တန်ဖိုး၏ ၁၀% မှ ၅၀% အကြားရှိရမည် (၎င်းကို ratchet ၏အရည်အသွေးနှင့်အမျိုးအစားအားဖြင့်အဓိကအားဖြင့်ဆုံးဖြတ်သည်) ။
- ချခြင်းဖြင့်အနည်းဆုံး lashing systems နှစ်ခုကိုအသုံးပြုရမည်။ αထောင့်ကိုတတ်နိုင်သမျှအကြီးမားဆုံးထားသင့်သည် (ပုံ ၃) ။ ထောင့်α 35 °နှင့် 90 °အကြားဖြစ်ရပါမည်။
သံမဏိ Ratchet ကြိုး